Dowladda Islaamiga ah oo sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDowladda Islaamiga ah oo sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso
May 24, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Qofka isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay bar kantarool ciidan oo ku dhow isgoyska Towfiiq ee gudaha Boosaaso. [Sawirka: Twitter]
Boasaaso-(Puntland Mirror) Dowladda Islaamiga ah ayaa sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa oo xalay oo Talaado ahayd ka dhacay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland kaasoo lagu dilay ugu yaraan saddex qof.
“Dagaalyahan katirsan Dowladda Islaamiga ah ayaa ku guulaystay in uu isku qarxiyo ciidamo Soomaali ah oo jooga magaalada Boosaaso ee bariga Soomaaliya,” ISIS ayaa bayaan ku tiri ay ku daabacday wakaaladeeda wararka ee Amaq.
Dadka la dilay ayaa waxaa ku jiray askari katirsan ciidamada booliiska iyo dhalinyaro ka ag dhawaa goobta qaraxa.
Qofka isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay bar kantarool ciidan oo ku dhow isgoyska Towfiiq ee gudaha Boosaaso, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Weerarka ayaa sidoo waxaa ka dhashay tiro dhaawac ah, sida saraakiil caafimaad oo jooga Boosaaso ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
May 24, 2017 Ciidamada ammaanka Puntland oo howlgalo ka bilaabay gudaha Boosaaso
ISIS claims responsibility for Bosaso suicide bombing
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s weekly cabinet meeting will take place in Kismayo port town, Somali PM said. Speaking to reporters in Mogadishu, Somalia’s Prime Minister Hassan Ali Khayre said that the cabinet meeting will take place [...]